Senator Xuseen “Xildhibaan Cismaan Boqore Ciidamadii ilaalada u aheyd ayaa laga kaxeystay | Wardoon
Home Somali News Senator Xuseen “Xildhibaan Cismaan Boqore Ciidamadii ilaalada u aheyd ayaa laga...
Senator Xuseen “Xildhibaan Cismaan Boqore Ciidamadii ilaalada u aheyd ayaa laga kaxeystay
Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan Aqalka Sare ayaa ka tacsiyadeeyay dilkii Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo gelinkii dambe ee maanta ay Kooxo hubeysan ku dileen degmada Kaaraan.
Senatorka ayaa sheegay in Xildhibaan Boqore ay kulmeen dhowr todobaad ka hor, kana walaacsanaa xaalada amnigiisa
“Xildhibaanka oo aan kulanay dhowr asbuuc ka hor ayaa wuxuu ka walaacsanaa Amnigiisa gaar ka ah maadaama Taliska Ciidanka Booliska ay ka kaxaysteen ciidamadii ilaalada u ahayd sida uu ii sheegay”ayuu yiri Senator Xuseen Sheekh Maxamuud.
Waxaa uu sheegay in Xildhibaan Boqore ay ka wada tirsanaayeen Xisbiga UPD oo ah Xisbi mucaarad ah oo inta badan dhaliila dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore ayaa si xornimo ah ku mari jiray magaalada Muqdisho, isagoo aan cabsi qabin, isla markaana Ilaalo wadan, waxaa uu kaga duwanaa Xildhibaanada Baarlamaanka inuu deganaa dhanka waqooyi ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay gaarigii dilka fuliyay iyo darawalkii waday, inkastoo labadii dabley ee dilka geysatay ay baxsadeen.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda dilka Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore, waxaana ay intaa ku dareen in raggii weerarka qorsheysan ay si nabadgelyo uga soo dhaqaaqeen halka uu dilka ka dhacay.
Previous articleDeni oo dalbaday in hubka dowlada wax laga siiyo
Next articleSAWIRO:Diyaarado dagaal oo xalay dad kulaayay Kuunya-Barrow
Nin u dhashay UK oo Wasiir ka Noqday dal ku yaalla...
Muslimiin Soomaali ay ku jireen oo lagu weeraray Masaajid ku yaala...